ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းကာ ခရီးသွားတိုင်းဆော့နေတဲ့ IVY လေးရဲ့ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – အနုပညာရပ်ဝန်း
သံစဉ်ချိုချိုလေးတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေးအေသင်ချိုဆွေဟာနာမည်ကျော် စတူဒီယိုတေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်… ။သူမဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ သမီးလေး lvyကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သမီးလေးနဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…။
သမီးလေးကို အဖေလိုတစ်မျိူး အမေလိုတစ်မျိုး နွေးထွေးကြင်နာမှု အပြည့်ပေးကာ စောင့်ရှောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…။ အေသင်ရဲ့ သမီးလေးဟာ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် လေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး…။
အေသင်ကတော့ သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို အမြဲဆိုသလိုဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…။အခုလည်း ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းကာ ခရီးသွားတိုင်းဆော့နေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်….။တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရမ်းတတ်လာပြီး ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ivyလေးတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် cele zone ပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုနိုင်စေရန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Ivy playing with toys ?
ဗီးဗီးက ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ခရီးထွက်ပြီတဲ့နော်။ဘယ်သူလိုက်ကြဦးမလဲ။ ??အရုပ်မလေးကိုလဲ ကျောပိုးထားသေးတယ်နော်။ ?
Posted by IVY on Monday, August 10, 2020